Magdhabid dhaawac ka imaaday daryeel caafimaad - 1177
Ersättning vid vårdskada - somaliska
Magdhabid dhaawac ka imaaday daryeel caafimaad
Ersättning vid vårdskada - somaliskaThe content concerns Västerbotten
Haddii adigoo lagu daryeeli laguu geysto dhaawac oo laga hortagi karay adiga waxaad helikartaa magdhabid oo xanuunka, kharashyada dheeriga ama adiga noqotid qof curyaan joogto. Arrintaas waxeey ku qorantahay sharciga bukaan jiif dhaawacmo. Sidaas daraadeed waa qasab in daryeel caafimaad bixiyaasha iyo shirkadaha daawooyinka iney leeyahiin ceymisha bukaan jiifka.
Adiga waxaad heli magdhab daawacyada imaado markaa suubineysid baaritaan, daryeel caafimaad – haddii xitaa la sugikarin qofka dhaawacaas mas'uulka ka ah. Sababaha waxaa kamid ahaan karo qalabka oo haleysan, qiimeyn qaldan ama daawo qalad, in adiga ka qaadid infeshan ama shil la kulantid.
Mararka qaarkood ma laga hortagi karo dhaawac iyo dhibaatooyin kale. Adiga markaas ma lagu siin magdhabid. Waa sidoo kale haddii laguu qoro daawo oo saameyn kugu keento laakiin daawadaas si sax baa laguugu qoray ama adiga kugu dhaco infekshan oo bakteeriyadaada sabab u tahay.
Ashkood dhaawac iyo baaritaan
Sidaa adiga u heli kartid magdhab waxaa qasab ah in adiga ashkood dhaawac ku dirsatid shirkada ceymiska bukaan jiifka la dhaho Löf, inaad adiga la xiriirtid ama ku caawiyaan shaqaalaha caafimaadka. Ashkoodka adiga waxaad ku qori foom qaas oo ka heleysid bogga internetka lof.se ama guddiga bukaan jiifka.
Haddii adiga dhaawaca ku soo gaaray wixii ka horeeyay 2015 iyo dhaawaca muuqdo iyo sabab u tahay daryeel caafimaad lagu siinaayay waxaa qasab ah in adiga ashkood soo suubisid saddex sano gudaheeda.
Dhaawacyada adiga ku soo gaaray 2015 ama wixii ka dambeeyay waxaa qasab ah in adiga ashkood soo suubisid 10 sano gudaheeda.
Shirkadaha daryeelka bixiyo oo dhakhtarada iyo dhakhtarada ilkaha waxey leeyahiin shirkad ceymis iyo ayaga baa mas’uul ka ah iney warbixin kaa siiyan shirkada ceymiska ey isticmaalan.